Turkey ozuzu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Turkey ozuzu
Ezu ozuzu bu ezigbo uru ma di mfe. Ma ọkụkọ, geese ma ọ bụ ọbọgwụ enweghị ike inye ụdị anụ dị otú ahụ iji nye ha nnukwu ezinụlọ. N'okwu a, nhọrọ kacha mma bụ turkeys, nke ịdị arọ ya ruru 20-30 kilogram. Nnụnụ ndị a nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ, nke kasị mkpa bụ anụ ha na-eri nri dị mma.
Ọnọdụ maka eto eto poupts na incubator
Taa, ozuzu nnunu na ulo ndi mmadu di iche iche. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa otú e si etinye nsen turkey n'ụlọ ma iwu ndị a ga-agbaso. Nhọrọ na nchekwa nke àkwá Nhọrọ nke àkwá bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke ịzụlite poults. Ahịa Turkey dị ọcha ma ọ bụ aja aja na agba, nke a na-atụgharị na obere specks.
Esi na-eto eto poupts na nke incubator
Usoro nke poupts azụlite na incubator bụ ọrụ nwere ọchịchị pụrụ iche, nke ụmụ chicks dị ndụ na-ahụ ike na-abịa n'ụwa a. Ịhọrọ ndị ọrụ ubi nke ndị na-anụ ọkụkọ-ndị ọrụ ugbo na-anụ ọkụkọ eriwo anya na ọ bụrụ na ha ejiri ntutu nsen, ọtụtụ chicks na-apụta (dịka pasent) karịa nke nwanyi na-etolite (mgbe ụfọdụ, a na-ebelata turkeys akụkụ nke njigide).